DHEGEYSO-Dil xalay kadhacay masaajid kuyaal degmada Xamar Jajab. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Dil xalay kadhacay masaajid kuyaal degmada Xamar Jajab.
Febraayo 24, 2017 9:21 g 0
Muqdisho, Feb 25 2017-Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dil habeenkii xalay ka dhacay gudaha Masjidka Bandhabow oo ku yaalla inta u dhaxeysa wadada Buundooyinka, gaar ahaan dhanka Degmada Xamar Jajab.
Dilkan oo dhacay Salaadii Cishaha kadib ayaa waxa uu ka dhacay Masjidka gudihiisa, waxaana lagu dilay nin lagu magacaabi jiray Maxamed Cumar, oo ahaa Askari ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka.
Qof ka mid ah Dadka Degaanka oo aan la xiriirnay ayaa inoo sheegay xilliga uu dilka dhacayay in Maxamed Cumar uu dhageysanayay Kitaab Fiqi ah oo uu Akhrinayay Sheekh magaciisa lagu soo koobay Cabdiraxiin.